#LA LIGA:Villarreal oo kooxda Real Madrid cashar ugu dhigtey Santiago Bernabeu | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #LA LIGA:Villarreal oo kooxda Real Madrid cashar ugu dhigtey Santiago Bernabeu
#LA LIGA:Villarreal oo kooxda Real Madrid cashar ugu dhigtey Santiago Bernabeu
Gool yimid waqtigii ugu dambeeyay ee ciyaarta ayaa waxay kaga heshay kooxda Villarreal labinta guusha dhigeeda Real Madrid, kadib markii ay la dheeshey kulan ciyaareed xiiso badan oo horyaalka La Liga ka tirsan.
Kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa guuldarro xanuun badan dusha u saartay naadiga Real Madrid oo ay ku booqatay garoonkeeda Santiago Bernabeu kulan ka tirsan horyaalka LA Ligaha Spain.
Kulankan ayaa fursado dhowr ah la isku helay qeybtii hore, balse waxaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Real Madrid oo gurigeeda joogta ayaa isku dayday dhowr fursadood oo ay hoggaanka ciyaarta ku qaban kareen laakiin uma suuro gelin.
Geesiga kulankan ee kooxda Villarreal waxa uu noqday Pablo Fornals, kaddib markii goolka qura oo ay Real Madrid uga adkaadeen uu dhaliyey.
Pablo Fornals ayaa ka faa’iideystay kubbad goolhayaha Los Blancos uu soo tufay, waxaana markii uu ka helay afka hore ee goolka uu si qurux badan uga dul qaaday goolhayaha Real Madrid sidaas ayeyna shabaqa ku gashay daqiiqaddii 87-aad ee dhammaadkii ciyaarta.
Los Blancos ayaa isku dayday inay ugu yaraan goolkaas iska soo gudo laakiin waqtiga ayaan u saamixin kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 looga adkaaday Los Blancos oo mininkeeda ku ciyaareysa.
Real Madrid ayaa hadda saddex kulan oo horyaalka La Ligaha Spain ah looga adkaaday garoonkeeda xilli ciyaareedkan.